Ugogbe anya anwụ Rapha dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ugogbe anya maka anwụ Rapha - ihe ngwọta nye
Ugogbe anya maka anwụ Rapha - ihe ngwọta nye
Ugogbe anya anwụ Rapha dị mma?
Rapha siPro Team Frameless glasses nweemagburu onweechiche nke echiche site na ọmarịcha anya, nke doro anya na nke na - eme ka anya m dị elu, agbanyeghị maka ụbọchị na - enwu gbaa, ha abụghị ọchịchịrị. Ọnụahịa ahụ na-asọmpi, kwa: ọ bụrụhaala na ị nwere ike ileghara anya ndị a na-ahụ anya, ndị a bụ nhọrọ ọkụ, nchekwa na nkecha.
Rapha, ụlọ ọrụ uwe na-agba ịnyịnya ígwè nke Simon Mottram guzobere na 2004, bụ otu n'ime ụdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè kasị ukwuu mgbe a bịara n'ihe banyere uwe. A na-atụnyere ụlọ ọrụ ahụ na Marmite n'ihi oke ọnụ ahịa ya na akara a na-ejikọkarị ya na ndị bara ọgaranya, dị ka Metrosexuals kpọrọ ndị Raphia na-akpọ Raphia. E hotara Mottram na-ekwu na ụfọdụ ndị hụrụ anyị n'anya na ndị ọzọ ahụghị ya n'anya na nke ahụ dị mma yana na ị ga-adị mma ịnọ ọdụ na igwe kwụ otu ebe ụbọchị niile na-enweghị mmasị n'ezie iwelata ịdị mma ya iji nweta ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa.
Peoplefọdụ ndị na-ajụ ihe kpatara na anaghị ahụ uwe igwe ịgba ọsọ n'otu ụdị dị ka ejiji, ebe Mottram kpọrọ ya ndị uwe ojii ejiji maka ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ dị ka ihe ijuanya na ndị mmadụ dị njikere itinye ihe karịrị on 2,000 na igwe kwụ otu ebe mana anaghị efesa na ngwa ziri ezi. Rapha na-ere ihe niile site na uwe ejiji na-agba ịnyịnya ígwè, ihe omume, ịkparịta ụka n'socialntanet, na ọbụna nwere ogwe aka ezumike ya ruo n'oge na-adịbeghị anya.
Ma olee otu obere ụlọ ọrụ na-akwa uwe si bịa? ghọọ usoro ndụ zuru ụwa ọnụ nke dugara ha n'ịchị ụwa ịgba ọsọ? Nke a bụ otú o si mee tupu Mottram amalite azụmahịa na 2004, Mottram chere ihe isi ike ihu ruo ihe karịrị afọ abụọ ma nwee ntachi obi na nzukọ 200 iji nye ego isingzụlite ego n'ihi na ịgba ígwè adịghị ewu ewu n'oge ahụ dịka ọ dị taa, enweghị ụlọ akụ chọrọ itinye ego, ọkachasị ebe Mottram pere mpe na-ere uwe ma ọ bụ na-azụ ahịa n'ịntanetị. Mottram zụlitere mgbe ego ego 200 mechara kpọọ isi site na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ ọnụọgụ dị elu nke 6 na ndepụta nke ndị enyi na ezinụlọ. Ebumnuche maka Raphain bịara Mottram na 2001 n'ihi na ike gwụrụ ya na uwe na-adịghị mma nke uwe ịnyịnya ígwè na ahịa ma chọpụta na ọtụtụ uwe ahụ adabaghị nke ọma ma ọ bụ jiri ihe ndị dị ala, ebe ndị ọzọ bịara naanị atụmatụ ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ. ịmalite Rapha site na ndị otu egwuregwu na-agba ịnyịnya 1960 afọ Afọ aha ya bụ onye na-eme ihe ọverageụverageụ St.
Raphael. N'ihi oke mmefu ego ya, Mottram kwesịrị ịkpọsa ụlọ ọrụ nnọchi anya Rafa site na okwu ọnụ naanị. N’oge na-adịghị anya, uwe ha webatara ọhụrụ malitere iwepụta mmasị, ụlọ ọrụ ahụ wee ree of 300,000 n’afọ mbụ ya.
Companylọ ọrụ ahụ toro ụkpụrụ anọ: hụ egwuregwu n'anya ma mee ka ọ bụrụ akụkụ nke ndụ gị; kpalie ndi ozo ma duzie site na ima atu; ahụhụ n'ihi na ezi ihe ezughi; ma chee maka onwe gị, na-eme ihe mgbe niile. Rapha si na 2007 pụọ mgbe ịgba ịnyịnya ígwè na Great Britain ghọrọ ihe a na-ewu ewu mgbe ọ gụsịrị Tour de France n'afọ ahụ na London na 2008 Beijing Olympics, ndị otu egwuregwu ịgba bọọlụ Team GB chịrị site na ọla edo 8, ọla ọcha 4 na ọla kọpa 2 na Bradley Wiggins si Team Sky, onye meriri na 2012 Tour de France. Ihe ịga nke ọma ndị Britain a mere ka ọgba aghara na-ewu ewu ịgba ígwè ma mepụta otu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya ígwè a na-akpọ MAMIL: Middle-Old Men in Lycra.
Ka ịgba ịnyịnya ígwè na-eto, ya mere mmasị na ngwaahịa Rapha, ya na ụlọ ọrụ ya na Paul Smith rụkọtara ọtụtụ oge, ọkachasị mgbe ha malitere ịnye ngwa ọrụ maka Team Sky na 2013, mmekọrịta ga-adịru afọ atọ, mana Mottram lere anya n'ihu ma ọ nweghị. achoro ka Rapha buru ulo oru ozo, ya mere ha hibere Rapha Cycling Club, otu ndi otu ndi otu na-enye ohere inweta ihe omume na ulo akwukwo ha gburugburu uwa, ihe ndi ozo, ntaneti ndi mmadu na ndi ozo, na ugwo ndi mmadu na ndi ozo. ndị ọzọ. Nke a nyere Rapha otu ntinye ego nke ndenye aha nke ga-enye nchebe karị ma ọ bụrụ na ahịa uwe kwesịrị ịda. N'ihe dị ka ndị òtù 13,000 na-akwụ ụgwọ ihe dị ka £ 70 na £ 120 kwa afọ, Rafa malitere mgbanwe na ụdị ndụ ndụ.
Na 2017, RZC Investments, ụlọ ọrụ isi obodo Walmart zụtara Rapha, site n'ahịa nke £ 63 nde kwa afọ, maka £ 200 nde. Nke a bụrịrị ihe ụlọ ọrụ ahụ na-enyo enyo, nke n'oge ahụ na-eme £ 1.4 nde uru.
N'agbanyeghị ire ere nke ọma, Mottram kwupụtara n'ihu ọha na ha kwesịrị ime ka ngwaahịa ha dịkwuo mfe iji meziwanye ogologo oge nke ụlọ ọrụ ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị. Achọghị m iji m tụnyere Aldi, onye na-ere a ersey 15 ịgba ịnyịnya ígwè. Nke ahụ nwere ike ịbụ mmejọ, ebe ọ bụ na Rapha nwere ụtụ ụtụ isi nke million 50 nde dị ka nke 2019 n'ihi na ahịa ha dara ada n'ihi oke ụba nke ego na onyinye.
Iji gbanwee ọghọm nke ụlọ ọrụ ahụ, Mottram kpebiri imechi azụmaahịa ndị na-ahụ maka njem, hapụ ndị ọrụ ma gbanwee usoro maka ọdịnihu. Ma olee otú ọdịnihu nke Rapha dị? Rapha kwupụtara na ha ga-eso Zwift rụkọọ ọrụ iji bido asọmpi asọmpi mbụ nke Rafa Cycling Club n'etiti Mee 4 na Mee 10. Were agbụrụ ahụ n'ịntanetị ebe onye ọ bụla nọgidesiri ike na-enye usoro usoro ọzụzụ otu egwuregwu na pro cyclist Justin Williams na ndị otu abụọ Rafa ugbu a na-enye Canyon-SRAM na EF Pro cgba ígwè, ahịhịa na ego na-enweghị ọrụ na-enyere ndị na-ege ntị aka ka ha gosi na ịgba ịnyịnya ígwè, kekọrịta uru ha na ịrụ ụka adịghị ya ka ogo ha dị ogologo oge.
google maps biking ntụziaka
N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma na ịchịkwa ya n'ahịa, Rapha ka na-arụrịta ụka n'etiti ndị na-agba ịnyịnya, ebe ụfọdụ na-atụ aro uwe ndị a kpọtụrụ aha n'elu Aldi nwere ike ịdị mma dị ka akụkọ akụkọ narị afọ nke 20. Ndị ọzọ kwenyere na na peloton Sunday ihe niile dị mkpa bụ ego ole ị nwere na ihe niile nwere ike ọ dịghị mkpa Mottram na Rapha na-echegbu onwe ha na mgbe onye ahịa zụtara Rapha, ọ bụghị naanị maka ịzụrụ ngwaahịa ahụ, ọ dịkwa banyere inwe ahụmahụ na mmekọrịta ya na ya bụ ika ahụ, ọ bụ otu ahụ ka o siri mee
Rapha ọ bụ ezigbo akara?
Emebere na 2004 mgbe onye nchoputa Simon Mottram hụrụ ọdịiche dị n'ahịa maka uwe ejiji ịgba ọsọ,Rafabụ ndị a ma ama maka ịme ihe mara mma, nke na-egbutu, nke dị elu. Ma ọtụtụ ihe na-ada mbà site na oke ngwaahịa ha dị oke ọnụ, ma ọ bụ echiche nke ịdị nro metụtara ya.
A na-ejikọ ugogbe anya anwụ Rapha?
RafaOnyekwereUgogbe anya maka anwụ$ 295) bu n’obi ka ịgba agbauwe anyamaka ndị na-achọghị ka ahụ ha n’ịgba ịnyịnya ígwèuwe anya. Ha dị ntakịrị ka ndị toro eto Wayfarers, mana okpokolo agba aza, na oghere na-agagharị agagharị na vetikal. Isi awọ na aja ajaanya mdịịgbanwee.
Ndi Rapha nwere Walmart?
Rafarere ya na ulo oru ntinye egonke nwere Walmartndị nketa $ 260 nde.
Eme Rapha na China?
Taa, ọtụtụRafaA na-emepụta ngwaahịa na London naemebere na China. Mana n'ihe gbasara imepụta ezigbo ihe, na ọnụ ọgụgụ nke nwere ike igboju ọchịchọ ahụ,Rafanwere isi iberibe arụmọrụ arụmọrụ ụzọmerena Far East.
Ego ole bụ Rapha?
British upmarket ịgba ígwè ikaRafaEresịala ndị nketa abụọ nke usoro Walmart maka? 200m.Rafa, nke guzobere site na onye na-enye ndụmọdụ maka akara na onye na-agba ịnyịnya ndụ Simon Mottram na 2004, kwupụtara na Mọnde na e reela ya na RZC Investments, ụlọ ọrụ kwụ ọtọ nke Steuart na Tom Walton.
sọks ịnyịnya ígwè
Creatednye kere Rapha?
Tọrọ ntọala site naSimon Mottramna London na 2004, Rapha na-eme uwe kacha mma n'ụwa. Ruo afọ 15, ngwaahịa anyị akọwagharịla nkasi obi, arụmọrụ, na ụdị ndị na-agba ịnyịnya ígwè site na ndị mbido zuru oke ruo ndị ọkachamara WorldTour.
Kedu ihe eji eme Rapha?
OmumaObodo Jerseydị ugbu amere naọhụrụ iteration nkeRafaPerformance Merino ngwakọta ngwakọta mejupụtara ọkwa dị elu, merino ajị anụ na polyester emebigharị post-n'ji. Iji polyester emegharịrị na-ebelata ntụkwasị obi anyị na ihe ndị na-amaghị nwoke ma na-enye ndụ nke abụọ na ihe ndị ga-aga na-ekpofu ahịhịa.
Gịnị ka Rapha na-anọchi anya ya?
RAPHA. Pụtara 'ịgwọ' n'asụsụ Hibru. International.
Nke a ọ bụ uwe kachasị njọ na akụkọ egwuregwu?
2007 Philadelphia Eagles (1934 Throwbacks)
Mgbe ị na-eche maka Ugo Philadelphia, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-abụ naanị agba na-abata gị n'uche, nke kpatara yayunifọmmgbagwoju anya ọbụna ndị na-eguzosi ike n'ihe nke otu. Sporting News kpọrọ ndị akasị njọNFLyunifọmn'imeakụkọ ihe mere eme.
Kedu ụdị ugogbe anya maka anwụ bụ Rapha pro team?
Rapha Pro Team Full Frame ugogbe anya. Uzo abuo nke otu iko ndi otu n’egosiputa onyo. A na-ahaziri ugogbe anya maka anwụrụ anya nke Pro Team Frameless iji hụ na enweghị mgbochi ọ bụla nye ọhụụ gị. Ọzọ, a na-ekpuchi anya m maka mkpuchi mgbe ọ na-ada.
Kedu ụdị iko ndị kachasị ọhụrụ sitere na Rapha?
Rapha amalitela nchịkọta ọhụụ ọhụụ ọ bụla, ya na ụdị ụzọ anọ ahaziri maka ụdị ndị na-agba ịnyịnya, site na onye na-agba ọsọ gaa na espresso sipper, site na onye njem ahụ. Ihe kachasị ọhụrụ bụ nke ekike abụọ nke otu iko otu Team (nke nwere etiti zuru ezu, otu na-enweghị osisi), iko ndị kpochapụla na Explore shades.
Kedu nke bụ ugogbe anya maka anwụ Oakley ma ọ bụ Rapha mara mma?
Ha na-erughị nkewa karịa Oakley Sutros, ndị na-enweghị nghọta karịa ndị ọkà mmụta sayensị-dị njikere Jawbreakers, na n'ezie obere ihe na-agwụ ike karịa ụdị Rapha's Full Frame nke ndị otu Pro. Lens na-acha odo odo / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe na-atọ ụtọ nke agba agba dịnụ, mana ihe gbara ọchịchịrị gbara ọchịchịrị na ogwe aka ya bụ akara aka.
ugwu biking na nkịta
Ugwu elu igwe na nkịta - otu esi edozi
Inggba ugwu n’elu adịghị mma maka nkịta? Mgbe. Ọ bụghị naanị na nke a dị egwu maka onye na-agba ya, ọ dịkwa egwu maka nkịta ahụ. Chee echiche na nkịta gị nwere ike ịgba na squir ma dọpụta gị, ma ọ bụ na ị nwere ike ịdọrọ nkịta gị n'okpuru akwụkwọ mpịakọta ọ hụghị na-abịa. 10 мая 2017 г.
biking akwa mgbidi china
Biking akwa mgbidi china - chọọ ngwọta
Nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè na Great Wall nke China? Nnukwu mgbidi nke China bụ mgbidi a na-apụghị ịbanye abanye na 3,000 afọ gara aga. Taa, ị nwere ike ịga ije, ma ọ bụ ọbụlagodi ịnyịnya ịnyịnya, ogologo ya niile bụ 8,850km.
Ebee ka eji eme njem igwe eletriki - otu esi edozi
Kedu ụgbọ ịnyịnya Trek a na-eme na USA?
onye na-enye igwe kwụ otu ebe
Onye na-enye igwe kwụ otu ebe - azịza ga-arụ ọrụ
Ndị na-azụ ọzụzụ ọ dị njọ maka igwe kwụ otu ebe gị? Ọ bụ ezie na 'ịnya onye na-enye ọzụzụ ga-emebi ikuku carbon gị' akụkọ ọdịnala agbaala, ịgba ịnyịnya ime ụlọ nwere ike bụrụ ihe iyi egwu gị igwe kwụ otu ebe n'ụzọ abụọ: nsogbu mgbagharị na ọsụsọ corpion.Apr 17, 2020
new york igwe kwụ otu ebe
New york ịnyịnya ígwè ụzọ ụkwụ - ahụkarị azịza na ajụjụ
Ebee ka m nwere ike ịga ịgba ịnyịnya ígwè na nso NYC? 8 na-amalite ịnyịnya ígwè na New York City. Ma ị na-eme ọgba tum tum ọhụrụ, na njem ọhụrụ n’obodo, ma ọ bụ naanị na-achọ ịgba ọsọ na-enweghị nchekasị. Gọọmentị Gọvanọ. Detuo njikọ. Osimiri Greenway. Hudson Osimiri Park Bikeway. Ochie Putnam Trail. East Park State Park na Gantry Plaza State Park. Ogige Astoria. Shore Parkway Greenway na agwaetiti Coney.
raleigh anyịnya igwe maka ire
Legbọ ala Raleigh maka ọrịre - ngwọta bara uru
Raleigh ọ bụ akara igwe kwụ otu ebe? Ya mere, iji zaa ajụjụ gị, Raleigh dị mma dị ka ọ bụla igwe kwụ otu ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na ụdị ego ahụ. Ọ bụrụ na ị jiri Raleigh tụnyere ụdị ọkwa dị elu dị ka Trek ma ọ bụ Specialized ma ọ bụ Cannondale, ị ga-ahụkarị na Raleigh ga-enwe ihe ndị ka mma n'otu ọnụahịa ahụ ma ọ bụ ihe ndị yiri ya na ọnụ ala.